स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नेपाल प्रमुख अनिर्वाण : ‘मेहनत साथ खेल, फूर्ति साथ काम गर’ - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सौन्दर्य स्वास्थ्य ∕ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नेपाल प्रमुख अनिर्वाण : ‘मेहनत साथ खेल, फूर्ति साथ काम गर’
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नेपाल प्रमुख अनिर्वाण : ‘मेहनत साथ खेल, फूर्ति साथ काम गर’
व्यवसायिक तनावलाई जीवनसँग जोड्नु हुँदैन्
हेल्थ आवाज शनिबार, २०७७ असोज १७ गते, १३:१६ मा प्रकाशित
बहु–राष्ट्रिय बैंकको रुपमा रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बन्नुभन्दा अगाडि अनिर्वाण घोष दास्तिदारले ब्रुनाई, फिलिपिन्स र श्रीलंकामा पनि यो पदमा आफ्नो भूमिका निभाइ सकेका थिए ।
भारतबाट बैंकिङ करिअरको थालनी गरेका दस्तिदारले युनिभर्सिटी अफ कलकत्ताबाट कमर्स विषयमा स्नातक डिग्री हासिल गरेका छन् । यो बाहेक उनले कोलकातामै सेड बिजनेश स्कुल, युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड र इन्सेडले संचालन गरेका विभिन्न कर्पोरेट म्यानेजमेन्टका कोर्सहरु सम्पन्न गरेका छन् ।
नेपालमा कार्यभार सम्हाल्न आउनु अगाडि ब्रुनाईस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा सिईओ रहनु भएका दास्तिदारको बैंकिङ करिअरमा प्रवेश गरेको २६ वर्ष भैसकेको छ । भारतस्थित एएनजेड ग्रिण्डलेज बैंकबाट बैंकिङ करिअर थालेका दास्तिदारले यसअघि भारतमै बिजनेस हेड, क्यापिटल मार्केट एण्ड रिजनल हेडजस्ता पदमा रहेर कार्य सम्हालिसकेका छन् ।
सन् २०१९ को मार्चदेखि ब्रुनाईबाट नेपालको शाखा सम्हाल्न आएका दास्तिदारसँग हेल्थआवाजले उहाँको दैनिक जीवनशैली कस्तो किसिमको छ भन्ने विषयमा गरेको कुराकानीः
दास्तिदार तपाईंको दैनिक जीवनशैली कसरी चलिरहेको हुन्छ ?
मलाई सानैदेखि खेलकुदमा रुचि भएका कारण कसरत, ब्यायाम र अरु खेलकुद गतिविधिहरु मेरो दैनिक जीवनसँगै जोडिएर आएका छन् । काम विशेषले विभिन्न मुलुकहरुमा गएपनि मैले आफूले गर्दै आएको ब्यायाम, कसरत र खेलकुदका गतिविधिलाई अलग गर्ने गरेको छैन ।
पछिल्लो पटक काठमाडौंमा कर्मक्षेत्र बनाएर आएपनि मेरो दैनिकीमा खासै परिवर्तन भएको छैन । अहिले म विहान ६ बजे उठ्छु र नियमितजसो साइकिलिङ गर्ने र जिममा गएर कसरत गर्ने र गल्फ खेल्ने गर्छु । यदि कसैले निमन्त्रणा गरेर बाहिरी कार्यक्रममा सरिक हुनु नपर्ने हो भने म १० बजे तिर सुतिसकेको हुन्छु । फुर्सदको समय बाहिर डुलेर बिताउने भन्दा पनि घरमै परिवारसँग बिताउन मजा आउँछ । मलाई राति–राति बाहिर डुलेर हिड्न खासै मन पनि लाग्दैन् ।
तपाईं आफूलाई स्वस्थ राख्न के–के गर्नुहुन्छ ?
म स्वास्थ्यको विषयमा अलि अनौठो किसिमकै स्वभाव भएको ब्यक्तिमा पर्छु । मैले घरमै जिम बनाएको छु । जसमा मलाई चाहिने सबै उपकरणहरु रहेका छन् । यो बाहेक म सातामा ७० देखि ८० किलोमिटर साइकिलिङ गर्छु ।
सातामा एक दिन गल्फ खेल्न जान्छु । यसले मलाई केही हिड्ने अवसर दिन्छ भने स्वच्छ हावा पनि खान पाउँछु । यो बाहेक म दिनहुँ कुनै न कुनै किसिमको शारीरिक अभ्यास भने गरिरहेकै हुन्छ । नेपालमा आएपछि अहिले बेला–बेलामा म ट्रेक र हाइकिङ पनि गैरहेको हुन्छु ।
तपाईं शारीरिक अभ्यासका लागि कति समय खर्च गर्नुहुन्छ ?
दिनहुँ विभिन्न किसिमका शारीरिक अभ्यास गर्दा यस्तै एक डेढ घन्टा खर्च गर्ने गर्छु ।
तपाईंको कामको प्रकृतिअनुसार तपाईंलाई धेरै नै मानसिक तनाव हुन्छ होला । यो तनावलाईं तपाईं कसरी ब्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
बैंकिङ क्षेत्रमै २८ वर्ष बिताइसकेको कारण सायद मेरो कामले गर्दा नै म अहिलेको अवस्थामा पुगेको हुँ । करिअरको यो अवस्थमा आउँदा मैले जीवनका सुन्दर क्षणहरुलाई संगालेको छु । कुनै पनि बैंकको सिईओ हुनु ठूलै कुरा हो । जीवन साँच्चै छोटो समयकै छ तर यो अवधिमा तपाईंले आफ्नो वरिपरी रहेका ब्यक्तिहरुबाट कसरी साथ, माया र सद्भाव पाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।
यो सन्तुलनलाई तपाईं आफैंले बनाउन सक्नु पनि पर्छ । यदि म कामका कारण तनावमा हुन्छ भने मैले के कुराको महसुस गर्नुपर्छ भने मैले आफ्नो व्यवसायिक जीवनलाई बढी नै महत्वपूर्ण ठान्दै आए । हो यो कुरालाई सधैं याद गरेर व्यवसायिक तनावलाई जीवनसँग जोड्नु हुँदैन् । तनावलाई सजिलै ब्यवस्थापन गर्ने क्षमता मसँग त छैन तर कम लिने भन्ने क्षमता भने म राख्छु ।
तपाईको खानपिनको शैली कस्तो किसिमको रहेको छ ?
म खानाको निकै सौखिन स्वभावको छु तर डाइटिङको पक्षमा भने छैन । मेरो खानपिनको शैलीमा कुनै सिद्धान्तअनुसार हुँदैन । यदि म स्वस्थ छु भने मैले ठिकसँग सबै किसिमका खानेकुराहरु खान सक्छु । तर, उत्सव र पार्टीहरुको समयमा धेरै खाना खाइन्छ भने त्यो बेला आफैंले सन्तुलन गर्नुपर्छ । यो विषयमा म बेला–बेलामा खानामा सन्तुलन ल्याउने पनि गर्छु । मलाई कुनै खाना राम्रो लाग्यो वा मनपर्‍यो भने यसले मलाई आनन्द दिने ठानेर खाने गर्छु ।
मेरो अर्को बानी के पनि छ भने म घरमै पकाएको खानेकुराहरु आनन्दले खान बढी रुचाउँछु किनकी यसले तपाईंलाई कुनै किसिमको हानी गर्दैन ।
तपाईं आफूलाई स्वस्थ र फूर्तिलो बनाउन के गर्नुहुन्छ ?
मेरो जीवनमा खेलकूदले धेरै नै प्रभाव पारेका कारण म अझैं पनि खेलाडी स्वभावको व्यक्तिमा पर्छु । खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले जीवन पनि प्रतिस्पर्धा नै हो भन्ने ठान्छु । मेरो जीवनको मन्त्र धेरै नै सजिलो र महत्वपूर्ण रहेको छ ‘मेहनत साथ खेल फूर्ति साथ काम गर’ ।
अनुहारको चाउरीपना हटाउने सजिलो तरिका यस्तो
वर्षातको समयमा एलर्जी किन हुन्छ ?
अनुहारमा प्राकृतिक चमक ल्याउन के गर्ने ?
स्वस्थ र सुन्दर छालाका लागि आवश्यक भिटामिनहरू